वजन कम स्वादिष्ट र स्वस्थ | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
तौल घटाउने एक प्रभावकारी तरिका डा। गेभ्रिलोभको विधि हो। वजन घटाउने कार्यक्रममा धेरै चरणहरू समावेश छन्।
मनोवैज्ञानिक सही ढंगले तौल घटाउन मा ट्युन गर्नुहोस्, अत्यधिक खानपानको मनोवैज्ञानिक कारणहरू पहिचान गर्नुहोस्;
भोक र भोक बिच छुट्याउन सिक्नुहोस्;
बिस्तारै शरीरलाई हानिकारक खानाहरू मनपर्‍यो भने;
भविष्यको लागि सहि पौष्टिक प्रणाली बनाउनुहोस्।
धेरैलाई आफ्नो आहार सीमित गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यस प्रक्रियालाई परिचित उत्पादनहरूलाई उपयोगी र हानिकारकमा विभाजन गरेर सरलीकृत गर्न सकिन्छ। उपयोगी जुस, ताजा तरकारीहरू र फलफूलका सलाद, कम फ्याट डेअरी उत्पादनहरू, माछा, समुद्री खाना, अनाज, कडा चीज।
बेकिंग, मिठाई, बटर, सॉस, डिब्बाबंद खाना, सॉसेज, "फास्ट" खाना, आलु (बेक्ड बाहेक), केरा, अंगुर हानिकारक मानिन्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जाम बिना आफ्नो समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने सिक्नु हो।
पोषण प्रतिबन्ध गर्न शुरू गर्दा, यो सम्झनु आवश्यक छ कि यसले केवल बढी तौलबाट छुटकारा पाउन, तर शरीरलाई सफा, स्वास्थ्य र मुड सुधार गर्दछ।
सही तौल गुमाउनुहोस्
जो तौल घटाउन चाहान्छन् उनीहरूलाई क्यालोरी सेवन घटाउनु पर्छ। तब शरीरले आफ्नो उर्जा भण्डार खर्च गर्न सुरु गर्दछ - फ्यामलाइ जम्मा गरिएको।
तपाईंले आंशिक खानुपर्दछ (दिनमा 4- times पटक)। भोकाउनुहुन्न, प्रतिबन्ध हटाउनुहोस्। अन्यथा, तौल घटाउने प्रक्रियामा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्नेछ, र शरीर बोसो भण्डार गर्न थाल्नेछ।
बिस्तारै स्वस्थ आहारमा स्विच गर्नुहोस्, केकको लागि आफूलाई नराम्रो नबनाउनुहोस्, यदि तपाईं वास्तवमै यसलाई खान चाहनुहुन्छ भने।
स्लिमि Sports खेलहरू
शारीरिक शिक्षा वर्गहरू उपयोगी छन्, तर "सामर्थ्यबाट" होइन। अवश्य पनि, तिनीहरू छिटो परिणाममा नेतृत्व गर्नेछन्। जो खेलकुद अभ्यासको लागि प्रयोग गर्दैनन्, कुनै पनि शारीरिक गतिविधि उपयोगी हुनेछ: घर सफा, नाच, नियमित पदयात्रा (करीव १०,००० कदम)।
पोषणमा विविधता - वजन कम गर्न स्वास्थ्य र स्वादिष्ट हुन्छ
आहार मेनू स्वतन्त्र रूपमा बनाउन सकिन्छ। स्वीकृत स्वस्थ खानाको सेटले तपाईंलाई विविध र सन्तोषजनक खान दिन्छ। तर उहि समयमा, क्यालोरी सामग्री सीमित गर्न, सर्विंग्सको मात्रा घटाउन आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। फ्राइड प्रतिबन्धित।
ठूलो बिहानको खाजा, -350 400०--XNUMX०० किलो क्यालोरी यी प्रोटीन फूडहरू (अण्डा वा कुखुरा, मासु, माछा, समुद्री खाना), फाइबरको साथ स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट हुन् (सम्पूर्ण अनाज अनाज, तरकारीहरू) र या त जैतूनको तेल वा पास्ता अनियोस्टेटेड नट वा बीउ (अर्बेक) बाट बनेका हुन्छन्।
लन्च (-300००--350० क्यालोरी) तरकारी वा मशरूम सूप, बोर्सेट (मेनूमा दर्जनौं स्वादिष्ट र कम क्यालोरी सूपहरू छन्), साथै साग वा दोस्रो डिशको साथ मीट सलाद।
१ack०-२०० किलोकिलोमा स्नैक। सामान्यतया यो फल, नट वा स्यान्डविच हो (केवल माखन बाहेक, सॉसेज)।
बेलुकाको खाना कम फ्याट मासु (खरायो) वा झिंगा, स्क्विड, माछा, साथै सलादको ठूलो अंश। भोल्युमेट्रिक, सन्तोषजनक र कम क्यालोरी - २-250०--300०० किलो क्यालोरी।
मिठाई र स्लिमिंग - संगत?
मिठाईहरूलाई हप्तामा २- times पटक अनुमति दिइन्छ, rece० g भन्दा बढि रिसेप्शनमा। यो सुक्खा फल, स्टेभिया, हस्तनिर्मित क्यान्डी हुन सक्छ।
खाना खानु भन्दा minutes० मिनेट पहिले वा पछि १. hours घण्टा पछि, १.२-२ लिटर प्रति दिन।
कहिलेकाँही तपाईसँग बिहान एक कप कफी वा चिनी बिना हरियो चिया पाउन सकिन्छ।
तौल घटाउनको लागि आहारले भोकमरीलाई अनुमति दिँदैन। त्यसकारण, स्न्याक्सहरूलाई स्वस्थ खाना बनाउन सिफारिस गरिन्छ। वजन कम गर्ने यस विधि प्रयोगको नतिजा प्रति महिना weight-kg किलो बढी तौलबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
यो चाखलाग्दो भयो। कति क्यालोरीहरू छन्: १ ट्याger्गेरिन २ स्याउ 1 मा table चम्मच चिनी
१ किलोमा कति क्यालोरीहरू छन्?
एक हप्तामा वजन कम गर्नुहोस् - तपाईंको प्रतिक्रिया?
कसले जेली सफा गर्ने प्रयास गर्‍यो एक हप्ताका लागि तौल घटाउने के समीक्षा?
53 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,370 प्रश्नहरू।